oral sex condom – MM Online Shopping
၁၀ခုပါ ၁ဘူးကို ၄၀၀၀ကျပ်ပါ
နူးညံချောမွေ့မှု့ရဲ့ထိအတွေ့ ရင်ခုန်စရာ ကွန်ဒုံး
ကွန်ဒုံးလေးကြောင့်​ စည်းခြားသလို မခံစားရဘဲ ကာမရသခံစားမှုကို အပြည့်​​ပေးမယ်​
ပုလွှေကြိုက်တဲ့ ကိုကိုမမ များအတွက်​ cherryအနံ့လေးဖြင့်အထူးသီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ကွန်ဒုံး​ကို သားဆက်ခြားလို့သူစုံတွဲများအပြင် အချိန်မတိုင်ခင် ကိုယ်ဝန်မရလို့သောစုံတွဲများလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ထိုအပြင်တံတွေးမှတဆင့်​ဖြစ်​​စေ​​တတ်သောရောဂါအပါအ၀င်​ အခြား ကူးစက်တဲ့ရောဂါနှင့်ကာလသားရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနုိုင်​ပါတယ် အနံက​တော့ ချယ်​ရီ အနံပါဝင်​ပါတယ်​
စေးကပ်မူအားကောင်းပီး ၁ ဗူး 10 ခု ပါရှ်ိ​သော​ကြောင့်​ အကြိုက်​အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​
​ဆောင်​ရန်​ /​ရှောင်​ရန်​အတွက်​​တော့ ၁. ကွန်ဒုံးကို မသုံးခင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးလား (expiration date) ကို ကြည့်ပါ။ သက်တမ်းမကုန်သေးတဲ့ ကွန်ဒုံးကိုသာ သုံးပါ။ ၂. ကွန်ဒုံး အထုတ်က ပျက်ဆီးခြင်း ပေါက်နေခြင်းမရှိတာကို သုံးပါ။ ၃.ကွန်ဒုံးကို ဖောက်တဲ့အခါ ကပ်ကျေး ဒါမှမဟုတ်ချွန်ထက်တဲ့အရာတွေသုံးပြီး မဖောက်ရပါ။ အထဲက ကွန်ဒုံးကိုထိမိသွားပြီး ပေါက်သွားနုိုင်ပါတယ်။ ၄. လိင်ဆက်ဆံ ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် (လိင်တန်မာလာတဲ့အခါ) ကွန်ဒုံးကို စွတ်ပါ။ အဲလိုစွတ်တဲ့အခါ ကွန်ဒုံးထိပ်ကို လေမခိုအောင် ဖိထားပါ။ ကွန်ဒုံးလိပ်ထားတာကို အပြင်ဖက်မှာထားပြီး လိင်တန်အရင်းထိ ရောက်အောင် ဆွဲချပါ။ (ကွန်ဒုံးလိပ်ထားတာအထဲဖြစ်နေရင် အောက်ကိုဆွဲချလို့ မရဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်) ၅. ဆက်ဆံပြီး လိင်တန်မပျော့မီ လိင်တန်ကို ပြန်ထုတ်ပါ။ ပြန်ထုတ်တဲ့အခါ လိင်တန်အရင်းကနေ ကွန်ဒုံးကို ကိုင်ထားပါ။ ၆.ပြီးရင် ကွန်ဒုံးကို ထုံးလိုက်ပြီး စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။
High quality latex material, soft and safe experience, give you and your lover extremely orgasm feeling.
Also can be used for oral sex.Type: Condom
Feature: Oral Sex Protection, Fruit Smell
Categories: Condom, Sex Toys
1 review for oral sex condom
Pk – 2019-04-26
Blow job သီးသန့်လား sex လုပ်လို့ရော ရတယ်မလား
Cherry Mask – 2019-04-29